DAAWO:Muuse Biixi oo Hargeysa kasoo dagay xili xaalad dagaal ay wajahayso Somaliland & Deegaano kamid ah gobolka Sanaag oo ciidamada Puntland…. – Puntlandtimes
DAAWO:Muuse Biixi oo Hargeysa kasoo dagay xili xaalad dagaal ay wajahayso Somaliland & Deegaano kamid ah gobolka Sanaag oo ciidamada Puntland….
HARGEYSA(P-TIMES)- Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa safar qaatay muddo afar maalin ah waxa uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta oo uu kusoo galay heshiisyo kala duwan, waxaana warar qaarkood ay sheegayaan in madaxweyne Biixi uu Hargeysa ugu soo laabtay xiisadaha ka aloosan gobolka Sanaag dartood.
Intii uu ku sugnaa Imaaraadka ayuu la kulmay Muuse Biixi dhakhaatiir kala duwan, isagoona muddoo labo maalin ah hubin caafimaad lagu waday.
Kama uusan hadlin xiisada kala dhaxaysa maamulkiisa dowladda Puntland, waxaase laga yaabaa in dagaal uu ka dhex qarxo labada ciidan ee Somaliland iyo Puntland oo weli hor fadhiya qaybo kamid ah gobolka Sanaag, waxaana xoggo hoose oo ay heshay Puntlandtimes.com ay sheegayaan in safarkiisa Hargeysa ay sabab u yihiin xiisada Somaliland kala dhaxaysa Jabhadda Caarre iyo ciidamada Puntland ee ku sugan qaybo kamid ah gobolka Sanaag.
General Caarre oo isna habeenkii xalay ahayd shir jaraa’id ku qabtay gudaha magaalada Garowe ayaa isna ku hanbajay in xaalad dagaal ay gali doonto Somaliland isla markaasna weeraro kala duwan ay jabhadiisu la bartilmaameedsan doonaan ciidamada Somaliland ee ku sugan bariga gobolka Sanaag.